"ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်မှာ 'မာရီလှတော' ဇာတ်ကောင်နဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ မိုးဟေကို" - Cele Gabar
“ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်မှာ ‘မာရီလှတော’ ဇာတ်ကောင်နဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ မိုးဟေကို”
မိုးဟေကိုကတော့ (၁၉၉၉)ခုနှစ်ကတည်းက ကြော်ငြာမင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာပြီး မော်ဒယ်လောကကနေ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်ကူးပြောင်းလာကာ လက်ရှိမှာဆိုရင် အနုပညာသက်တမ်း နှစ်နှစ်ဆယ်ခန့် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အချိန်အထိ ဇာတ်ကားပေါင်း (၃၀၀)ကျော်ကို ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး (၂၀၁၅)ခုနှစ်က ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုလ်းမြို့မှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ “(2015) Asia Model Festival”ပွဲကြီးမှာ “Asia Model Award” ဆုကြီးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိုးဟေကိုဟာ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူပီပီ အကယ်ဒမီလူမင်းကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရိုက်ကူးမယ့်”အောင်ဆန်း”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ အရေးကြီးတဲ့အမျိုးသမီးဇာတ်ကောင် ‘မာရီလှတော’ နေရာက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။”မာရီလှတော”ဟာ ရာဇဝတ်ဝန်ထောက် ဦးလှတောရဲ့ ဇနီးဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်အစိုးရက အလိုရှိနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ ကျုံမငေးသခင်တင်မောင်တို့ကို ပုလိပ်များလက်ကနေ လွတ်မြောက်အောင် ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။
“အောင်ဆန်း” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို စက်တင်ဘာလ(၂၆)ရက်နေ့ကနေ အောက်တိုဘာလ (၁၅)ရက်အထိ ရန်ကုန်အမျိူးသားပြတိုက်က သီဟာသနပလ္လင် အပါအဝင် မန္တလေးမြနန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်၊ အင်းဝဆင်ကျုံးခံတပ်၊ဗားဂရာကျောင်း၊ မယ်နုအုတ်ကျောင်း၊ နတ်မောက်မြို့က ဗိုလ်ချုပ်နေအိမ်တွေမှာ စတင်ရိုက်ကူးဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်း သိရပါသေးတယ်။ဒါရိုက်တာ လူမင်းကိုယ်တိုင်က ဂျပန်နိုင်ငံအထိသွားရောက်ကာ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ သမိုင်းအချက်အလက်၊အထောက်အထားတွေကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ရတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကြီးမှာ မိုးတစ်ယောက် သူရဲ့ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်တွေကို ဘယ်လို ချပြမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ….
Source ; World Of Film Stars
“ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးရုပျရှငျမှာ ‘မာရီလှတော’ ဇာတျကောငျနဲ့ ပါဝငျသရုပျဆောငျခှငျ့ရရှိခဲ့တဲ့ မိုးဟကေို”
မိုးဟကေိုကတော့ (၁၉၉၉)ခုနှဈကတညျးက ကွျောငွာမငျးသမီးတဈယောကျအနနေဲ့ အနုပညာလောကထဲကို စတငျဝငျရောကျလာပွီး မျောဒယျလောကကနေ သရုပျဆောငျတဈဦးအဖွဈကူးပွောငျးလာကာ လကျရှိမှာဆိုရငျ အနုပညာသကျတမျး နှဈနှဈဆယျခနျ့ ရှိနပွေီဖွဈတဲ့ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ယနအေ့ခြိနျအထိ ဇာတျကားပေါငျး (၃၀၀)ကြျောကို ပါဝငျရိုကျကူးခဲ့ပွီး (၂၀၁၅)ခုနှဈက ကိုရီးယားနိုငျငံ၊ ဆိုလျးမွို့မှာ ကငျြးပ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ “(2015) Asia Model Festival”ပှဲကွီးမှာ “Asia Model Award” ဆုကွီးကိုရရှိပိုငျဆိုငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
မိုးဟကေိုဟာ ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျစှာ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့သူပီပီ အကယျဒမီလူမငျးကိုယျတိုငျဒါရိုကျတာတဈယောကျအနနေဲ့ ရိုကျကူးမယျ့”အောငျဆနျး”ရုပျရှငျဇာတျကားမှာ အရေးကွီးတဲ့အမြိုးသမီးဇာတျကောငျ ‘မာရီလှတော’ နရောက ပါဝငျသရုပျဆောငျခှငျ့ရရှိခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။”မာရီလှတော”ဟာ ရာဇဝတျဝနျထောကျ ဦးလှတောရဲ့ ဇနီးဖွဈပွီး အင်ျဂလိပျအစိုးရက အလိုရှိနတေဲ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးနဲ့ ကြုံမငေးသခငျတငျမောငျတို့ကို ပုလိပျမြားလကျကနေ လှတျမွောကျအောငျ ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ။
“အောငျဆနျး” ရုပျရှငျဇာတျကားကို စကျတငျဘာလ(၂၆)ရကျနကေ့နေ အောကျတိုဘာလ (၁၅)ရကျအထိ ရနျကုနျအမြိူးသားပွတိုကျက သီဟာသနပလ်လငျ အပါအဝငျ မန်တလေးမွနနျးစံကြျောရှနေနျးတျော၊ အငျးဝဆငျကြုံးခံတပျ၊ဗားဂရာကြောငျး၊ မယျနုအုတျကြောငျး၊ နတျမောကျမွို့က ဗိုလျခြုပျနအေိမျတှမှော စတငျရိုကျကူးဖို့ ပွငျဆငျနတေယျလို့လညျး သိရပါသေးတယျ။ဒါရိုကျတာ လူမငျးကိုယျတိုငျက ဂပြနျနိုငျငံအထိသှားရောကျကာ တနျဖိုးရှိလှတဲ့ သမိုငျးအခကျြအလကျ၊အထောကျအထားတှကေို သှားရောကျလလေ့ာခဲ့ရတဲ့ ဒီဇာတျကားကွီးမှာ မိုးတဈယောကျ သူရဲ့ သရုပျဆောငျစှမျးရညျတှကေို ဘယျလို ခပြွမလဲဆိုတာကတော့ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ CeleGabar ပရိသတျကွီးရေ….
မမွေငျ့မိုရျဟာ Rising Star တဈယောကျအဖွဈကနေ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ထိပျတနျးမငျးသမီးတဈလကျဖွဈလာနိုငျမလား
“ရေးမြို့မှာသွားရောက်လှူဒါန်းမယ့် ဇဝန ဖေါင်ဒေးရှင်းကို (၅)သိန်းကျပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မေလသံစဉ်”
My Day မှာပါ စာတှအေတူတူတငျထားကွတဲ့ ထှနျးထှနျးတို့ ခဈြသူနှဈဦး